San Marino sonyere na Europe-China Light Bridge
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ San Marino » San Marino sonyere na Europe-China Light Bridge
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ San Marino • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Dịka akụkụ nke Afọ Europe-China Tourism Year, Republic nke San Marino abanyela na atụmatụ nke European Commission Light Bridge, akwa mmiri dị n'etiti Europe na China. Ebumnuche a na-enye ihe ncheta nke akụkọ ihe mere eme, ụlọ ndị nke oge a, skyscrapers na àkwà mmiri na-acha uhie uhie na kpakpando ọlaedo n'oge ememme Lantern nke China, ihe nnọchianya nke olileanya na ọdịmma maka afọ na-abịa.
Site na Fraịde, 2 nke Machị, ruo Sọnde, abalị anọ nke ọnwa Machị Buildinglọ Gọọmentị, Statue nke Nnwere Onwe na Portal nke dị n’etiti San Marino na willtali ga-acha ọkụ na-acha uhie uhie, site na mmekorita ya na Ulọ Ọrụ Ọha na Eze.
Na Freedom Square na 5: 30 pm Minista nke njem, Maazị Augusto Michelotti, na Minista nke Omenala, Mr. Marco Podeschi, ga-aga emume ọkụ na ọnụ ụzọ mbata nke Palacelọ Gọọmentị, yana ndị isi China nke Confucius Institutes in Italy, ndị nọ na San Marino maka nzukọ, yana Onye isi nke San Marino-China Association, Maazị Gianfranco Terenzi. Na njedebe nke emume a, a ga-ewepụ oriọna ndị China nke European Travel Commission zigara na mbara igwe, dị ka ihe ngosi nke ezigbo akara.
Na 2018, Philatelic na Numismatic Office nke Republic of San Marino ga-ewepụta stampụ stọpụ raara nye EU - China Tourism Year. Ọzọkwa, atumatu ohuru na mmekorita ya na ndị San Marino-China Association ka aga-eme atụmatụ.